Xerada bara-kacayaasha Tawakal oo ay ka bilowdeen barnaamijyo iskaa wax-uqabsaa oo qashina lagu aruurinayo. – Radio Daljir
Seteembar 4, 2012 6:07 b 0
Gaalkacyo, Sep 04- Xerada bara-kacayaasha ee? Tawakal oo ku yaal duleedka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo waxaa maanta ka biloowday oloole ballaaran oo si iskaa wax u qabsaa dadka ku nool ay isaga qaadayaan qashinka korna ugu qaadayaan nadaafada deegaanka.
Oloolahan muhiimkaa ee? iskaa wax u qabsaa ayaa waxaa hormuud ka ah Gudoomiyaha Xerada bara-kacayaasha? Tawakal Salaad C/nuur Warsame iyo madaxa IDPsyada Gaalkacyo maamo Dahabo Maxamed Barre (Wadani), iyagoo haweenka Tawakalna ay bilaabeen inay qashinka aruuriyaan ka dibna ay ku gubaan goobo gaara oo horay loogu cayimay.
Boqolaal qoys oo u badan haween ayaa qashinka ku gurayay agab aan sidaa u badnayn oo ay ka mid yihiin fargeetooyin maadaamaa kaamku uusan haysan agab sidaa u badan oo qashinka ay ku maareeyaan.
Dahabo Maxamed Barre (Wadani) madaxa IDPsyada Gaalkacyo oo iyaduna saxaafada la hadashay ayaa sheegtay oloolahan inay garteen ka dib markii ay meesha ka baxday gacan siinta kaamamka magaalada Hay’adihii wax ka qaban jirayna muddooyinkii danbe ay yaraadeen, maamo Wadani ayaa intaasi ku dartay sidoo kale inay arintan bilaabeen maadaamaa ay soo dhawyihiin xili roobaadyadii oo ay u baahan tahay in la iska sii qaado qashinka oo ay cuduro ka dhalan karaan hadii aan la iska sii maarayn.
Tawakal ayaa ka mida? kaamamka ku yaal magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhanka waqooyi waxaana halkaasi ku nool boqolaal barakacayaala.